Ny volo eo amin'ny tratran'ny vehivavy
Mihalehibe amin'ny vehivavy maro ny volo eo amin'ny tratra. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia mitovy amin'ny fluff izy ireo ary tsy hita maso, fa indraindray dia ny zavamaniry manify sy maizina. Andeha hojerentsika hoe maninona ny volo eo amin'ny tratra dia mitombo amin'ny vehivavy, ary mety ho afaka hamongotra haingana azy ireo ianao, ary hialany amin'ny voka-dratsiny.
Ny antony mahatonga ny volo mainty eo amin'ny tratran'ny vehivavy?
Ny volo eo amin'ny tratra ao amin'ny vehivavy dia miseho raha misy ny hormona tsy mety , ary mihamaro ny isan'ny hormones lahy. Io toe-javatra io dia mety hitranga noho ny fahasamihafan'ny aretim-pisefoana sy ny olana eo amin'ny hopitaly na ny adrenal. Saingy matetika no mitranga izany mandritra ny fitondrana vohoka. Matetika dia misy tranga izay ahitana ny volo eo amin'ny tratra ao amin'ny tratra rehefa miseho amin'ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina sasany. Ny fanafody toy izany dia:
Misarika ny endriky ny volo sy ny lova. Raha misy olana amin'ny fianakavianao eo amin'ny sehatry ny vehivavy, dia mety hanelingelina anao ihany koa izy.
Ahoana no hanesorana ny volo eo amin'ny tratra?
Raha misy vehivavy manana volo eo amin'ny tratrany, dia mila manaisotra azy ireo ianao. Tsy azo atao izany miaraka amin'ny fanampiana ny mpandoko sy ny ravina, raha mihamafy ny volony, ary mety ho tezitra mafy ny hoditra. Misy fomba hafa ahafahana manala ny volon'ny volo tsy azo ampiasaina. Ny fomba tsotra sy mora azo indrindra dia ny manongotra ny volon'ireo pensilihazo. Fomba tsy mahafinaritra sy lava ity, fa hohadinoinao ny olana mahazo anao mandritra ny 7-10 andro.
Ho afaka hanala haingana ny volo izay niseho teo amin'ny tratran'ny vehivavy ianao, afaka mampiasa salon na trano ianao epilation :
Na dia mitombo aza ny volony, dia ho hitanao fa lasa malemy izy ireo ary tsy mahagaga izany.
Raha toa ka misy zavamaniry tsy fantatra izay tratra nandritra ny tsy fahombiazan'ny hormona, tokony hifandray amin'ny endocrinologist ianao, satria ny fanafody ihany no hanampy amin'ny fampihenana ny haavon'ny lahy hormonina izay nahatonga ity olana ity.
Mofo ho an'ny volo misy menaka oliva - 5 fomba mahomby
Chemistry ho an'ny volo midadasika
Scythe amin'ny loko
Ahoana ny fomba hanamboarana volon'ondry telo dimampolo?
Esory ny volon'osy
Paint for ombre
Hairy hoditra amin'ny volo fohy
Mitoraka volo lava
Alopecia areata amin'ny vehivavy - fitsaboana
Kianja nahazo diplaoma
Menaka palma menaka
Ny fomba faratampony indrindra amin'ny fahaverezan'ny lanja
Salady "Pine cone"
Tavy mena ao anaty tranom-borona
Fomba ahoana no handraisana pilaf - tsiambaratelo sy sakafo ho an'ny sakafo tsy manam-paharoa
Gainer - fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena
Pizza ao am-pofo
Ahoana no ahafahako manatanteraka ny sitrapoko?
Ny herinandro faha-18 amin'ny maha-bevohoka dia tsy mampihetsi-po
Wallpapers amin'ny efitrano fivorian'ny ankizy - ireo hevitra tsara sy safidy tsara indrindra
Fanondroana vatana ho an'ny vehivavy
Tontolon'ny rindrina MDF ho an'ny orinasa anatiny
Toeram-ponenana trano kanto - design
Fitiavana any am-pasana: biby 10 izay maty aorian'ny fiterahana
Vato ho famaranana ny fototry ny trano
Niditra tao amin'ny hopitaly i Salma Hayek!
Ravaka akanjo amin'ny kiraro mainty